'बाढी पहिरोबाट हुन सक्ने क्षति न्युनिकरणका लागि सरकार पूर्ण तयार भएर बसेको छ' 'बाढी पहिरोबाट हुन सक्ने क्षति न्युनिकरणका लागि सरकार पूर्ण तयार भएर बसेको छ' 'बाढी पहिरोबाट हुन सक्ने क्षति न्युनिकरणका लागि सरकार पूर्ण तयार भएर बसेको छ' 'बाढी पहिरोबाट हुन सक्ने क्षति न्युनिकरणका लागि सरकार पूर्ण तयार भएर बसेको छ'
‘बाढी पहिरोबाट हुन सक्ने क्षति न्युनिकरणका लागि सरकार पूर्ण तयार भएर बसेको छ’
-रामकृष्ण सुवेदी, प्रवक्ता, गृहमन्त्रालय
हिजोदेखि परेको अविरल वर्षाले जनधनको क्षति गरिसकेको छ । भर्खर वर्षा सुरु भएकाले अझै जोखिम उत्पन्न हुने सम्भावना छ । बाढी पहिरोबाट हुन सक्ने क्षति न्युनिकरणका लागि गृहमन्त्रालयले के गरिरहेको छ भन्ने विषयमा ऋषि धमलाले मन्त्रालयका प्रवक्ता रामकृष्ण सुवेदीसँग कुरा गरेका छन् । नेपाली रेडियो नेटवर्कको कार्यक्रम नेपाली बहसका लागि गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ ।
बाढी र पहिरोले जनजीवन अस्तव्यस्त भएको छ । गृहमन्त्रालयले के गरिरहेको छ ?
नेपालको भौगोलिक बनोटका कारण हरेक वर्ष बाढी पहिरोको प्रकोपले दुःख दिने गरेको छ । यसको व्यवस्थापनका लागि हामीले विगतका वर्षमा भन्दा धेरै प्रभावकारी काम गरेका छौँ । विपद् जोखिम न्युनिकरण तथा व्यवस्थापन ऐन २०७४ ल्याएका छाँै ।
ऐन आयो, तर कार्यान्वयन भएको छैन नि ?
कार्यान्वयन भइरहेको छ । ऐनले तिनै तहको सरकारमा विभिन्न समितिहरुको प्रावधान राखेको छ । गाउँपालिका र नगरपालिका अध्यक्षको नेतृत्वमा स्थानीय विपद व्यवस्थापन समितिले काम गरिरहेको छ । जिल्ला तहमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा पनि विपद व्यवस्थापन समिति गठन भएको छ । त्यसैगरी प्रदेश तहमा पनि मुख्यमन्त्रीको संयोजकत्वमा प्रदेशस्तरीय विपद व्यवस्थापन समिति छ । केन्द्रमा पनि गृहमन्त्री र प्रधानमन्त्रीको संयोजकत्वमा विपद व्यवस्थापन समिति छ ।
बाढीपहिरोबाट सात हजार व्यक्ति कुपोषित, छसयको स्थिति गम्भीर
जल उत्पन्न प्रकोप व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्य गर्न समिति गठन
समितिहरु धेरै छन् । तर बाढीपहिरोले जनधनको क्षति भइरहेको छ नि ?
सबै सुरक्षाकर्मीहरु उद्धारमा खटिएका छन् । आवश्यक परेको खण्डमा उद्धारका लागि सुरक्षाकर्मीलाई तयारी अवस्थामा पनि राखिएको छ । नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र नेपाली सेनालाई उद्धारका लागि तयारी अवस्थामा राखिएको छ । नेपाली सेनाको हेलिकप्टर पनि तयारी अवस्थामा राखिएको छ । राहत उद्धारका सामग्री पनि भण्डारण गरिसकेका छौँ । बाढीपहिरो रोक्न नसके पनि त्यसबाट हुने क्षति न्युनिकरणका लागि हामीले सबै प्रयास गरेका छाँै ।
प्राकृतिक विपत्ति आउँछ, यसलाई रोक्न सकिदैन । तर राहत र उद्धार त प्रभावकारी बनाउनुपर्यो नि ?
हाम्रो तयारी पर्याप्त छ । राहत र उद्धारका सामग्रीहरु सम्बन्धित ठाउँमा पुगिसकेको छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा जिल्लामा विपद व्यवस्थापन कोष खडा गरिएको छ । उक्त कोषमा न्युनितम ७ लाख रुपैयाँ हुन्छ । राहत र उद्धारका लागि उक्त कोष प्रयोग गर्न निर्देशन दिइसकेका छौँ । तिनै तहले ऐनअनुसार काम गर्ने हो भने राहत र उद्धारको काम प्रभावकारी हुन्छ ।
हिजोदेखि परेको वर्षाका कारण अहिलेसम्म के कति क्षति भएको छ ?
अहिलेसम्म प्राप्त विवरणअनुसार ११ जिल्ला बढि प्रभावित भएको छ । तराईमा कैलाली, बाँके, चितवन र महोत्तरीमा बाढीको प्रभाव देखिएको छ । त्यसैगरी पहाडका रोल्पा, सिन्धुली, काठमाण्डौ लगायतका जिल्लाहरुमा क्षति पुगेको छ ।
अहिलेसम्म एक दर्जन जति मानवीय क्षति भइसकेको छ । तिनका परिवारलाई के राहत दिनुहुन्छ ?
विपद व्यवस्थापन कोषबाट प्रमुख जिल्ला अधिकारीले मृतकका परिवारलाई रकम सहयोग गर्नुहुन्छ । त्यसैगरी बाढी पीडितलाई अवस्था हेरेर लत्ताकपडा, खाद्यान्न, औषधि लगायतका सामग्री वितरण हुन्छ ।
तराई क्षेत्रमा त डुबानको समस्या पनि हुन्छ । यसका लागि के तयारी गर्नुभएको छ ?
पहिलो कुरा भनेको डुबान हुन सक्ने क्षेत्रमा सतर्कता अपनाउनुपर्छ । मनवीय क्षति रोक्नका लागि खतरा ठानिएका ठाउँबाट मानिसलाई सार्नेबाहेक तत्काल अरु केही गर्न सकिदैन ।
नेपालमा बाढी पहिरोको प्रकोप प्रत्येक वर्ष आउँछ । तर सरकारले समस्या समाधानका लागि दीर्घकालिन उपाय खोज्न किन सक्दैन ?
हामीले दीर्घकालिन समाधानका लागि नै ऐन ल्याएका हौँ । तीन तहको सरकारमा नै विपद् व्यवस्थापनका लागि समिति गठन गरेका छौँ । यद्यपी वर्षातको पानी व्यवस्थानका लागि सरकारको ध्यान गएको छैन । अब घरघरबाट नै वर्षात्को पानी व्यवस्थापन गर्न सक्यौँ भने यही वर्षा बरदान हुन सक्छ । यो काम गृह मन्त्रालयले गरेर मात्रै हुँदैन ।
२०७५ असार १९ गते प्रकाशित, l १०:३८